AdButler: WordPress Yakabatanidzwa Ad Kushandira | Martech Zone
Chitatu, July 5, 2017 Mugovera, July 8, 2017 Douglas Karr
Kana iwe uine WordPress saiti uye uchida kubata shambadziro kune vashambadzi vako, AdButler inogona kunge iri sarudzo yakanakisa pamusika. Izwi reWordPress kusangana kuburikidza nemawidgets kunoita kuvaka uye kuendesa nzvimbo dzezvipenga chidimbu chekeke, uye iyo AdButler system inonyanya kugadziriswa, inoshanduka, inotyisa, uye inotopa whitelabeling.
AdButler Platform Zvimiro Zvinosanganisira:
Kubudirira - Inovimbika uye yakavimbiswa kuyera sezvo kudiwa kuchikura, kubva kumazana kusvika kumabhirioni ezviratidzo.
Header Bidding - AdButler auction inogonesa vaparidzi kusanganisa kutengesa kwakananga neakawanda emusoro wekubhidha vadyidzani kuti vawedzere mari.
Yakapfuma Media Ad Rutsigiro - Shandira zvese zvakasikwa, zvinosanganisira HTML5, vhidhiyo, flash, mifananidzo, email, nhare uye asynchronous ad mafoni.
Vhidhiyo Ad-Serving (VAST) - AdButler yakapusa kushandisa VAST 2.0 inoenderana module inokusevha nguva nekurwadziwa pamoyo.
Instant Mishumo - Kuwana ipapo ipapo kune simba, realtime mishumo.
Ini ndakatora AdButler yemuedzo wekutyaira uye ndakanyatso fadzwa nemavakirwo akaitwa system yacho. Dai pasina chimwe chinhu chisipo, ndingadai ndakanyatsoishandisa pane saiti… kuzvishandira. Ini ndinoshuva kuti dai saiti yaive neakavhurika yeinquery peji uye kugona kwevashambadziri kuti vazvishandire ivo vega. Pamusoro pezvo, kusangana pamwe neyekubhadhara gedhi rekutora kushambadzira mari kubva kune vanoshambadzira kungave kwakanaka.
Kana iwe urikugadzirisa ako ega masosi uye vashambadziri, zvakadaro, AdButler ingangoita-yakapfuma chikuva.
AdButler Ad Kushumira Sarudzo Sanganisira
Pacing - AdButler inoyera kunze kwako mushandirapamwe wekutora nekufamba kwenguva kwekutogovera kwekuratidzira.
Kakawanda Kurova - Deredza huwandu hwenguva iyo shambadziro icharatidza kune mumwe mushandisi.
Zuva Kuparadzana - Target kushambadzira zvinoenderana nenguva yezuva.
Geographic Targeting - Target kushambadzira nenyika, dunhu kana nyika, kana kunyangwe zvakanangana neguta.
Platform Targeting - Target uye shambadzira kushambadza zvichienderana nevashandisi vechishandiso vari kushanyira pane.
Keyword Targeting - Target kushambadzira mishandirapamwe nemazwi akakosha kusanganisira masikadhi emusango.
Akawanda Mushandisi Maakaundi - Gadzira akawanda maakaundi emushandisi sezvaanodikanwa kubata uye kushandira kuverenga.
Kushambadzira Channel - Boka kushambadzira kwakafanana kubva kune akawanda masosi ekushambadzira kuenda kune imwechete, nyore-kushandira kushambadzira chiteshi.
Kubatsira Kutsigira - Dare rekutsigira reAdButler rinowanikwa kuburikidza nefoni kana e-mail.
Maitiro ekuisa uye kugadzirisa AdButler paWordPress
Isa plugin, pinda kiyi, uye yako WordPress saiti yakanyatso kubatanidzwa neAdButler! Heano mavhidhiyo akati wandei ari kukufamba nenzira iyi:
Tags: ad serverkushambadzira kushandiraanonamekushambadzira chiteshigeographic yakanangwa neserura adkeyword rakanangidzirwa ad serverchikuva chakanangiswa kushambadzira serverWordPressWordPress kushambadzira kushandira